Fosafosa - Mag tsy mampino
Fitiavan'i Leonard Cohen ny boky
Mety fantatrao i Leonard Cohen amin'ny mozikany lalina sy mahafinaritra. Manintona anao ny feony, ary misy dikany ny heviny ary misy dikany ny tonony. Fa eo an-tampon'ny asany mozika tena mahomby, Cohen dia nalaza ho an'ny tontolon'ny haisoratra ho…
Mitolona i Emma Stone mba handray fanapahan-kevitra
Nilaza ny mpanakanto an-tsehatra Emma Stone fa zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny misafidy ny safidiny manokana amin'ny fiainana, ao anatin'izany ny zavatra tsy hitany fa tsotra amin'ny ankapobeny. Ilay artista mahatalanjona Spider-Man 2 izay mampiaraka miaraka amin'ny mpilalao sy kintana Andrew Garfield dia nilaza fa miezaka ny…
Robert Downey Jr. Toetra tokony hosoloina sa hovonoina?
Robert Downey Jr. dia nanaiky ny fandaminana ny fanakaikezana ny sarimihetsika "Vindicators" kanefa mbola tsy voafaritra ny sarimihetsika "Iron Man 4". Nisy ny tatitra milaza fa hisolo an'i Tony Stark i Arno Stark raha manomboka ny fikirakirana "Iron Man 4" raha Downey kosa…
Ny asa tsy manam-paharoa nataon'i Gioya Tuma-Waku
Mamaky toy ny tantaran'ny kintan'ny sarimihetsika ny resumé an'i Gioya Tuma-Waku. Izany hoe, hatramin'ny fahazazany dia tapa-kevitra ny tsy hamela na inona na inona hanakana azy tsy ho mpilalao sarimihetsika izy, nanandrana nanakivy azy ny ray aman-dreniny, nilalao tamin'ny lalao an-tsekoly izy, nahazo diplaoma tamin'ny oniversite…
Ilay Charlie Clark manana talenta marobe
Charlie Clark dia lehilahy mahaliana tokoa. Izy dia mpilalao sarimihetsika tena mahay, raha tsy hilaza afa-tsy izay, ary ankoatry ny zavatra hafa, dia mpitsoka amponga fanta-daza izy ary mpilalao tenisy lehibe. Ny kofehy mampifandray ireo taranja tsirairay ireo dia ny fomba nitantanan'i Charlie hatrizay…
Avy any Mumbai, India ka hatrany Hollywood, mpilalao sarimihetsika Raveena Kapse
Iza no handeha 8,400 3,000 kilaometatra hahatongavana ho mpilalao sarimihetsika? Raveena Kapse mety. Na dia manodidina ny XNUMX kilaometatra fotsiny aza no nitetezany ilay tanjona manokana tao an-tsaina - avy any New York ka hatrany Los Angeles. Izany dia satria efa nanidina avy tany Mumbai, India nankany NYC izy…
Anna Scott dia mpamokatra fandaharana amin'ny fahitalavitra. Avy any Londres izy ary mipetraka any Los Angeles ankehitriny. Izy dia mpamokatra afaka mahavita zavatra ary manao izany izy. Afaka manoratra script izy, manangana ny lojika fitifirana, mivantana ary…
Ilay mpilalao anglisy, Amelia O'Loughlin, dia miresaka ny maha-zava-dehibe ny "fahamarinana" amin'ny asany
Ramatoa O'Loughlin dia nahazo diplaoma tamin'ny mari-pahaizana "kilasy voalohany" amin'ny Theatre & Performance avy amin'ny University of Leeds (oniversite 10 ambony any UK) tamin'ny 2015, izay nahazoany loka noho ny fahaizany mahatalanjona. Niofana tao amin'ny The Lee Strasberg Institute any Los Angeles izy nanomboka teo…
Q & A Miaraka amin'ny Filmmaker Vvett Datsopoulou
Vao tsy ela akory izay no nahitanay an'i Vvett Datsopoulou momba ny sasany amin'ireo teboka tokony hotsaroany fony izy mpanatontosa sarimihetsika. Ity no nolazainy: karazana fikarohana inona no ataonao mba hiomanana amin'ny tetikasa tsirairay iasanao? Matetika aho manao fikarohana…
Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpilalao sarimihetsika sy mpialamboly Giannina Esquivel
Nahita ilay mpilalao sarimihetsika be atao Giannina Esquivel izahay mba hahalala ny momba ireo tetik'asany farany sy ny sasany amin'ireo toerana tena tiany. Ity no nolazainy: Salama Giannina, fihaonana mahafinaritra anao. Lazao anay ny fomba nidiranao voalohany tamin'ny indostrian'ny fialamboly:…